အိတ်ဆောင်ရေပြင်နှင့်ရေငုပ်သင်္ဘောရေသန့်စက်နှင့်စစ်ထုတ် - အခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အကောက်ခွန်ကင်း ၀ ယ်ပါ WoopShop®
အိတ်ဆောင်အဆောက်အ ဦး အပြင်ရေဘေးနှင့်ရေသန့်စင်ခြင်း & Filter
$17.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $34.99
မှစ. သင်္ဘောများ ရုရှားပြည်ထောင်စု တရုတ်နိုင်ငံ ၾသစေတးလ် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
အပြာရောင် / ရုရှဖက်ဒရေးရှင်း အပြာရောင် / တရုတ် အပြာရောင် / သြစတြေးလျ အပြာရောင် / အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
အိတ်ဆောင်အဆောက်အ ဦး အပြင်ရေမှပြန်လည်သန့်ရှင်းရေးနှင့်စစ်ထုတ်ခြင်း - Blue / China backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အရေအတွက်: 1 PC ကို
ပစ္စည်း: ABS, PE
filtering ပစ္စည်း: ultrafiltration အမြှေးပါး, activated ကာဗွန်
Size: 22.5 * 3.0 * 3.0cm
Net ကအလေးချိန်: 90.0g
အထူးအင်္ဂါရပ်များ: လေးဇာတ်စင်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်! Water Filter တွင်ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ဘက်ထရီများမရှိခြင်း၊
သင်၏ရေငတ်မှုကိုလျင်မြန်စွာငြိမ်းသတ်ပါ - ၎င်းသည်စီးဆင်းနှုန်းမြင့်မားသည်
အန္တရာယ်အကင်းဆုံး - ဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ ၉၉.၉၉% ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်
1 x ရေစစ်ထုတ်စက်
ငါအချိန်မတိုင်မီရောက်ရှိပါကသက်သေပြရန်ပျောက်ဆုံးနေသည်။ ၎င်းသည်ခက်ခဲပြီးကြည့်ကောင်းသည်။ ရောင်းသူကမည်သည့်အခါမျှသတင်းပို့ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ